Iyini isimo se-VKontakte?
I-Intanethi, Ukuphromotha kwesayithi kuma-social media
Igama elithi "isimo" ngesiLatini lisho "isimo". Umqondo ungabonakali, futhi uchaza isimo sendaba, isikhundla sakhe kulokhu noma kuleso simiso, sphere noma isakhiwo. E-Intanethi, isimo sisigijimi, ibinzana noma isithonjana esithile esilondolozwe futhi sihunyushwe ndawonye ngolwazi lokuxhumana lomsebenzisi wezinsiza zewebhu noma ekhasini layo.
Iyini isimo se "VKontakte"?
Isimo kwinethiwekhi yokuxhumana "VKontakte" kufakwe ekhasini, bonke abangane nabasebenzisi bayibona lapho beyivakashela. Ngakho-ke, ubika ngalokho ozizwa ngaleli phuzu ngesikhathi, noma mayelana nokuthi ufuna ukuthini kubhalisile bakho. Ngokuvamile lezi statuses zisebenzisa izinkulumo ezinamaphiko, izingcaphuno, ama-aphorisms. Abanabhizinisi nabanomabhizinisi njengesimo banikeza isixhumanisi esakhiweni sabo, ngaleyo ndlela bakhulisa ukufika kwabo. Ngakho-ke abathandi bathanda imizwa yabo. Esikhundleni ungasakaza amafayela womculo. Ukushintsha njalo izigameko ezintsha "VKontakte" kwenza ikhasi lomsebenzisi ibe yimithombo ethakazelisayo neyithakazelisayo, okuzofuna ukuvakashela esikhathini esizayo. Lolu hlobo lwenkonzo lungaba indlela enhle kakhulu yokuqalisa umqondo. Isibonelo, ufuna ukuthengisa okuthile noma ukuqhuba ucwaningo. Uma ubika lokhu, bonke oxhumana nabo abakhuthele bazoba nokwazi futhi baphendule. Ngakho-ke, ukuphendula umbuzo mayelana nokuthi isimo se "VKontakte", ungasho ukuthi: lokhu uhlobo lwezincwajana. Ukuze uyidale, udinga ukuya ekhasini lakho. Ngaphansi kwedatha yokuxhumana kukhona umugqa "Shintsha isimo". Uma uchofoza kuso ngenkinobho yegundane, insimu yokufaka izovulwa. Lapha udinga ukufaka umbhalo womlayezo ofuna ukusakaza. Uma ubheka ibhokisi "Tshela abangani bakho", abhalisile abalandela umsebenzi wabangani babo nemiphakathi bazobona umlayezo wakho kokuphakelayo kwezindaba.
Dala izimo ezipholile zokuthi "Uthintana" ukuheha futhi uqinisekise ukuvakashelwa njalo ekhasini lakho! Ukuze wenze lokhu, sebenzisa izithonjana nezimpawu ezahlukene, usakaze umculo kanye nomlayezo. Fantasize futhi uzame - futhi umlayezo wakho womphakathi uzoba ngowokuqala.
Iyini isimo kwamanye amanethiwekhi omphakathi?
Dala umyalezo othakazelisayo ku- "Ofunda nabo", futhi uzoba eduze kwesithombe sakho njalo. Nokho, sicela uqaphele ukuthi kuphela ukuqala kwenkulumo kubonakala lapha. Wonke umlayezo kubasebenzisi bokuxhumana nabantu uzobonakala kuphela uma beza ukukuvakashela. Isimo "ku-Odnoklassniki" sidalwe ngendlela efanayo njengoba kwenziwa "VKontakte". Iya ekhasini, bhala umbhalo ngaphansi kolwazi lokuxhumana, unamathisele isithombe noma isithombe - futhi umlayezo wakho kubangani ulungele. I-social network Facebook (Facebook) inikeza ukubhala okucabangayo. Ngakho-ke, kumlando wakho ubona wonke ama-status akho, futhi abangani babakubona ekusondweni kwezindaba. Lapha ungabhala izivivinyo, unikeza izixhumanisi, ushicilele izithombe nezithombe, okusheshayo ukugubha abangane, ukuzithokozisa. Ungakwenza lokhu ngokuya ekhasini lakho bese uchofoza ebhokisini elibizwa ngokuthi "Ucabangani?" Njengoba manje uyazi ukuthi isimo sini kumanethiwekhi omphakathi, ungajabulela ukusebenzisa le nsizakalo ngezinhloso zakho.
Ungabhalisa kanjani i- "VKontakte"? Indlela "VKontakte" yokubhalisela kumuntu?
Ungasusa kanjani umlando wokusesha ku-Yandex: izincomo
Ukukhuthazwa Ngezingosi Zomphakathi!
Imibuzo exhomekeke kuGeorge ku-SERP
Indlela yokuhlola isayithi lokukhwabanisa: imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo
Marcasite (itshe): sezindawo umlingo imihlobiso
Inhloko-dolobha ye-Estonia Tallinn - idolobha-Museum of Ephakathi.
Izimpendulo ezimbalwa kumbuzo obuhlungu wokuthi kungani ngingenabo abangane
Lviv amachibi: imibiko Anglers
Journey Ephakathi. lombhishobhi Pitsunda
Ihhotela Laxmi Morjim kuyona (Morjim, India, Goa): ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Abaqeqeshi best sibalo ukushushuluza (eMoscow). Amagama, izimpumelelo, imiklomelo kanye nokubuyekeza
Izinhlobo amazinyo okufakelwa, amathuba abo kanye nebubi
Ukuphuza isitsha sezinyosi - funda futhi uzifundele
Dzhonni ebolile kanye Sex Pistols. ekuqaleni